Ukufudumala kunye Nobuhlobo Kwi-Swindon
Igumbi lakho lokulala e indawo yokuhlala nenesidlo sakusasa sinombuki zindwendwe onguGinny
Sihlala kwindawo ezolileyo ye-de-sac kwidolophu encinci yase-Amberley, sisebenzela indawo exakekileyo yasemaphandleni kunye newayini, indawo entle yokumisa ngaphambi kokuba uye emazantsi okanye emantla. Ukungena kwethu evekini kunokwenziwa ngamalungiselelo ngokuxhomekeke kwizibophelelo zomsebenzi, ndicela undithumelele umyalezo ku-Airbnb.
Igumbi lokulala lisecaleni kwegumbi lakho lokuhlambela kunye nendlu yangasese eyahlukileyo. Ibhedi yibhedi yakudala yobhedu enamashiti omqhaphu, ingubo yangaphantsi yoboya kunye neentsiba/phantsi. Kwakhona ingubo yombane kwezo busuku bubandayo. Ngesicelo kukho elinye igumbi lokulala elikhoyo, izicelo zokusebenzisa kufuneka zenziwe kunye nabamkeli zindwendwe. Isidlo sangokuhlwa sinokufumaneka ngoMgqibelo nangeCawa ngeendleko ezongezelelweyo, nceda ubuze.
Inqaku elongezelelweyo, sinegumbi lokuhlambela elimnandi kwigumbi leendwendwe, nceda ukuba unayo nayiphi na imiba yokuphefumla sinokuyisusa kwigumbi lakho ngaphambi kokufika kwakho.
Sihlala kwidolophu encinci yelizwe ebonelela ngeekhefi ezimangalisayo kunye nokuthenga, ukusuka kwiivenkile ezintle ezincinci zasekhaya ukuya kubathengisi bempahla emangalisayo kwaye ke kukho iindawo zokuthengisa iwayini, usuku olunokuchithwa kungcamla iiwayini zethu ezigqwesileyo. I-Amberley yimizuzu engama-30 ukuya kwengama-40 kumantla e-Christchurch, indawo entle yokumisa ngaphambi kokuba uye e-Christchurch okanye ukuba uhamba usiya emantla ukuze uhlale ngaphambi kokuba uye e-Hamner Springs ukuze ufunxe kwi-Hot Pools okanye e-Kaikoura ukuze ubukele umnenga. Siyindlela elula yokuqhuba ukuya e-Akaroa enokubandakanya usuku ngaphandle kwesikhephe se-Akaroa Dolphins, amava amnandi. Kwidolophu yethu encinci sineendawo zokutyela ezininzi ezincinci kunye neekhefi, ivenkile enkulu kumgama wokuhamba ukusuka kwindlu yethu. Eyona dolophu ikufutshane iRangiora inemboniso bhanya-bhanya yokuchitha ubusuku ukuya kwimiboniso bhanyabhanya. Ukuba udlala igalufa i-Amberley inebala legalufa eli-5 lemizuzu emi-5 ukusuka kwindlu yethu nakwi-Amberley Beach xa uhamba ngaselwandle. Sineendlela zokuhamba ezikufutshane ezithatha iiyure ezi-2-4 ukugqiba.
Xa ushiya i-Amberley unokukhetha ukuya emazantsi ngeNdlela eMazantsi eScenic okanye ukuya emazantsi ngendlela yeState 1, ujikeleze iChristchurch okanye emantla ukuya eKaikoura okanye eHanmer Springs kwindlela eya ngaphaya kweLewis Pass ekhokelela kwingingqi entle yaseTasman okanye ukuya. kuNxweme lwaseNtshona. Ukuhamba emantla kuhola welizwe luhambo olumangalisayo, indawo ebalaseleyo kodwa kunye nendlela entsha abaye bayenza ukususela ngoNovemba ka-2016 inyikima ngokuqwalasela umonakalo wale ndlela.
Umbuki zindwendwe ngu- Ginny
Mother, Wife and nurse to a household of old and young men, love gardening, long walks, sailing and out riding horses in our beautiful country side. Love having my family around me when we all get together, cooking up a meal and sharing the time with them, with a glass of wine, red or white! Also, so enjoy meeting people from around the world.
Mother, Wife and nurse to a household of old and young men, love gardening, long walks, sailing and out riding horses in our beautiful country side. Love having my family around me…
Siyafumaneka kwiindwendwe zethu ukuba zinikeze ulwazi lwethu lwendawo yethu yasekhaya kunye nangaphezulu. Iindwendwe zethu zamkelekile ukuba zichithe ixesha lokuthetha kwaye sabelane nathi ngamava azo ohambo.